[object Window] – Inona Fa?
Raha tsy ianao no hatramin'ny daty momba ny teknolojia, anao mety manontany tena hoe inona DVD burner dia. DVD burner dia fitahirizana periferika fa dia optical ary izany dia tsotra miaraka saika ny rehetra ny solosaina ankehitriny ary tao anatin'ny taona vitsivitsy farany teo. Ry zareo no manoratra manokana optical media fa ireo antsoina hoe DVD-ROMS, ary izy ireo mety tena mitahiry ny maha-betsaka maha - 4.7 gigabytes iray tokana kapila. Azonao atao ihany koa ny fividianana DVD burners izay mijoro irery ianao ary afaka hifandray azy ireo Lahatsary Nomerika Recorders koa. Ho th...
Ahoana No Navaozina Amin'ny Microsoft Office 2007?
[object Window] 2007 (efa fantatra ho toy ny Birao 12) dia Microsoft ny vaovao productivity suite ary nanao misy amin'ny vahoaka tamin'ny 30 janoary 2007. Ny birao 2007 misy maro ny fanatsaràna tiako ho entina mihoatra ny teo aloha Microsoft Office 2003, anisan'izany ny vaovao server-lafiny fitaovana, manatombo reliability sy ny mpitandro ny filaminana, ary miankina tanteraka amin'ny hafa ny mpaneran'ny mpampiasa dia niantso ny "Kofehy" - tianao ny fahanteran'ny anjan'ny tolotra & fitaovana trano fisotroana tao aloha Birao valaka. [object Window] 2007 mitantana ao, na W...
Kapila mahaleotena efa ampahany manokana amin'ny solosaina hatramin'ny vao mangiran-dratsy ny indostria, miainga amin'ny voina mahazo karatra, mba tape cassette mpanodina, ho zana-kapila angamba ny kapila mpanodina sy ny maro hafa koa. Ny iray amin'ireo forefronts ny kapila mahaleotena ankehitriny dia ny optical kapila; ny orinasa tsotra optical kapila amin'izao fotoana an-tsena dia ny DVD burner, izay mihoatra na latsaka supplanted ny CD-burner any an-tsena toerana. DVD-burners tonga amin'ny karazana mahatonga ary hanaraka ny modely, ary hardware specifications; rehetra nikendry (mihoatra na ...
Refurbished Laptop Solosaina- Navaozina Na Hividy Vaovao?
Izany zava-mitranga farafahakeliny indray mandeha eo amin'ny fiainana tsirairay kahie solosaina-slows midina any amin'ny fandehan'ny, ary vao doesnt manana ny hitsangana sy handeha fa tena ampiasaina. Tahaka ny ankamaroan'ny olona, ianao alefaso ankafizinao antivirus fandaharam -([object Window]) mba hahazoana antoka fa ny bugs havent tratrany ny rafitra, ary ianao-aza mandefa spyware fandaharana mba hahazoana antoka fa spyware tsy overloading ny rafi-ny loharanon-karena. Handray zavatra dingana iray lavidavitra kokoa ianao izay voasoratra mivoaka tsy misy ilàna azy ny zavatra avy ao amin'ny hanomboka ny karazan-tsafidy, manao bios adjustments sy ge...
Mozika Fitaovana Nomerika Mpanera – Ny MIDI Trinity
Amin'ny fomba ofisialy, MIDI mijoro ho an'ny Mozika Fitaovana Nomerika Mpanera, ary izy no namorona tany 1982. Ireo andro, izany dia manondro ny telo anisan'i: 1. - Ara-batana connector eo amin'ny fitaovana elektronika ary eo amin'ny fitaovana elektronika ary MIDI controller, misy fafan-teny matetika. Ny connector mandray endrika ao amin'ny MIDI TANY sy ny MIDI MIVOAKA jacks endrika izay MIDI tariby afaka ny miloka fa plugged ho misy fitaovana elektronika (ary youd ho gaga amin'ny fomba maro ny mozika hardware nivoaka anio dia ny MIDI...
Dvd Ireo Lamina – Fahasamihafana Ianao Mila Mahalala
Misy karazana maro samihafa ireo lamina azo ampiasaina ho an'ny optical media dizitaly fitahirizana androany. Misy ny CD-ROM, [object Window], DVD-R sy HD-CD-RW ireo lamina fa misy. Mety ho kely confusing, noho izany ianao dia te-hahafantatra hoe inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny endriny samihafa. Ny specifications ho nomerika optical media ireo lamina dia faritana amin'ny alalan'ny miasa ny vondrona. Ireo fiasana ireo vondrona ireo dia ivondronan'ny isan-karazany ny injeniera izay hisolo tena ireo orinasa mpamokatra izay mikasa hanangana sy mivarotra...
Toro-hevitra Sy ny Torohevitra Ho an'ny CRM Software
Heniky ny resaka momba ny CRM software ny mety ho kely goavana niezaka ny hamaritra whats tsara indrindra ho an'ny ny fandraharahana. Sanatria youre tsy mbola zatra CRM izany no ho Mpanjifa Fifandraisana Fitantanana ny Software izay nanjary iray tena manan-danja ho an'ny rehetra ny fandraharahana izay mitrandraka amin'ny mpanjifa. Raha ny marina dia tao anatin'ny taona vitsivitsy izay mampiasa CRM software efa ny mampahafantatra zava-dehibe eo amin'ny fandraharahana mampiseho ny fitomboan'ny tombom-barotra sy ireo fotsiny mitazona misy ao amin'ny. Nefa misy maro dif...
Ipod Toy Ny Malaza Indrindra Mp4 Mp3 Mpilalao
Ity misy mp3 / mp4 mpilalao fa amin'ny mpankafy mozika ny manaiky indrindra tamin'ny fotoana maoderina. Mipetraka any ETAZONIA Apple, ny iray amin'ireo lehibe indrindra mpamokatra avy amin'ny solosaina, kahie sy ny solosaina hardware sy ny software, nampahafantatra ny iPod tamin'ny 2001 miaraka tokana modely ho an'ny mozika iraisampirenena ny tsena. Apple ihany amin'ny fampidirana vaovao iPods isaky ny taranaka. Ny farany indray dia ny iPod 5G. Apple ihany koa dia tonga miaraka amin'ny roa hafa variants: ny iPod Shuffle (tsy digital display), ny iPod Nano (ny smalle...
Iraisam-Pirenena Ny Finday Sampan-Draharaha
Raha toa ianao ka iray izay dia be iraisam-pirenena niara-dia, avy eo ianao dia te ny mpanjifa mba ho afaka hahatratra anareo avy na aiza na aiza ianao dia mety ho ao anatin'ny tontolo. Fa inona no sasany amin'ireo safidy ianao rehefa tonga mba hametraka ny io haavon'ny finday ([object Window]) ny sampan-draharaha eran-tany? Ve ianao voatery hividy vaovao ny drafitra? Ve ianao voatery mandoa tahan'ny manafintohina? Fotsiny ny zavatra misy? Voalohany indrindra, ny firenena aiza ianareo no mipetraka dia tena manan-danja rehefa tonga internation...
Mahazo Mifandray Amin'ny Microsoft Fahavitrihan'ny CRM
Maro samihafa ny mpanjifa fifandraisana fitantanana ny software safidy nefa tsy misy tena maha-ambony na tena mora ho toy ny Microsoft CRM ary ianao afaka misafidy eo amin'ny toerana voapetraka ny rindran'asa na ianao afaka mahazo mifandray sy manana ny Microsoft ve ny fampiantranoana. Microsoft CRM Mifandray manome anao amin'ny rehetra ny tombontsoa ny mijoro irery software. Mazava ho azy fa samy manana ny fomba tombontsoa sy manohitra. Ny tena olana lehibe eto amin'ny nampiantrano software dia mitohy ny fandaniana isam-bolana taorian'ny volana fa tsy mbola...
Solosaina: Nahoana Ianao no Tokony&#8217;t Andramo Data ezaka fanarenana ny Tenanao
Eran-tany momba ny solosaina, data ezaka fanarenana zavatra fantatsika rehetra, ary hiankina amin'ny indray very tsy hita data. Ny dingana data ezaka fanarenana dia tena sarotra, iray ianao dia tokony tsy miezaka ny manao ny tenanao. Sarotra mihatra indrindra, dia tena marefo tokoa ary mila fanampiny manokana momba ny fitsaboana rehefa izy no niasa tao amin'ny. Ianao dia tsy maintsy mitandrina amin'ny kely anisan'i ao amin'izy ireo, izay no antony ihany no voaofana manampahaizana manokana momba ny tokony ho miezaka data ezaka fanarenana. Rehefa ianao amin'ny voalohany haharitra ny mafy d...
Ny Fahitàn'ny Momba Ny Ipod Video
Ny vaovao iPod lahatsary dia nampisavorovoro be ny fanehoan-kevitra, maro ny fahitàn'ny, miady hevitra momba ny heriny sy ny lafy ratsiny ny rindranasa, kalitao sy ny fahasahazan'ny. Ireny fanadihadiana anatiny no zava-dehibe indrindra noho ny zava-misy fa ny vaovao iPod lahatsary dia natomboka tsy matotra fanadihadiana ny tsena, ireo mpanjifa azy sy ny faniriana. Avy ity fomba fijery ity dia izao ny hetsika ary dingana lehibe ao amin'ny lahatsary fampandrosoana. Ny fahitàn'ny matetika nanamarika ny amazement sy ny lehibe ...
CRM Software Rafitra
CRM dia nanaiky ny tanjon'ny Mpanjifa Fifandraisana Fitantanana ny dia mba alefaso ny fikambanana ho amin'ny fanatsarana ny mandrindra ny mpanjifa amin'ny alalan'ny fampidirana azo inoana ny asa sy ny fomba fiasa ho interacting miaraka amin'ireo mpanjifa.
Ny tontolo solosaina gaming, avo-tontona sy ny tena fifaninanana
Ny tontolo gaming online no miova hatrizay. Avy amin'ny maha-iray ny fialam-boly dia lasa fifaninanana izay vola foana no manana andraikitra andraikitra.
Solosaina Filaminana: Ahoana No Patches Ampiasaina?
Patch sizes vary ary mety ho toy ny kely toy ny sasany kilobytes na handeha ho avo zato megabytes ambony sy ny lehibe kokoa ny habeny, ny lehibe kokoa ny manova ny patch dia mifamatotra amin'ny fanaovana. [object Window], rehefa haino aman-jery, toy ny sary sy ny feo., dia niova na dia nanampy fa tsy ny fandaharam-pianarana, ireo lasa fa tsy ny lehibe. Izany dia matetika hita ao patches natao manavao na manova ny solosaina lalao. Tsy tahaka ny rindrambaiko natao ho an'ny voalohany ny fametrahana asa, patches amin'ny ankapobeny dia haingana mba hampihatra. Ny sasany pa...
Ergonomics Mba Hanampy Amin'ny RSI
Maro ny solosaina mifandray amin'ny ergonomics fa afaka hanampy sy toro-manamora ny famahana ny kely monja avy miverimberina rarin-tsaina injury. Ny laharana voalohany manomboka raha tsy ianao no olona iray izay manana hipetraka amin'ny solosaina ho an'ny mpanolo-tsaina anelanelan'ny fotoana mety ho anao ny fanovana ny karazan-kitendry izay azonao ampiasaina. Ergonomic fafan-teny ireo izy ireo fa misy lavaka eo afovoany izay mamela kokoa ny tsara sy voajanahary hanatratra ny kitendry. Na dia afaka mahazo niteraka ny fafan-teny izay mametraka ny writs kokoa comf...
Tamin'i Sony ny PlayStation 3 farany nalefa manerana izao tontolo izao, ny manaraka-gen ady videogames afaka manomboka ny ao earnest. Microsoft efa manana voapetraka araka ny tokony ho izy fototra ho an'ny Xbox 360, fa tsy ampy ny antoka dominance, raha Sony ny mpanjifa' ny marika fankatoavana dia ny maha-efa nandramana ny fetra avy amin'ny PS3 no avo toerana ny vidiny. [object Window], mandritra izany fotoana izany, dia carved nivoaka mahafinaritra niche ho an'ny tenany araka ny fanamboarana manaraka-gen tsy momba ny hi-def, miaraka amin'ny antsoina hoe ridiculously, fa ny tena malaza Wii. Tao anatin'ny ...
Nomerika Ny Lahatsary Dia Lehibe Noho Ny Fampidirana Manokana Ny Vokatra
Nomerika ny lahatsary iray vaovao ara-teknolojia izay azo ampiasaina ary nolalaovina mora kokoa noho ny taloha analog fambara. Ity generic fe-potoana tsy ho fanina ny anarana DV, izay no iray manokana karazana lahatsary nomerika. Ao anatin'ny lahatsary dia noraiketina tamin'ny tape nefa ankehitriny miaraka amin'ny nomerika amin'ny lahatsary izany dia afaka ny ho voarakitra ao amin'ny tape, DVD na straight ny kapila mafy ny solosaina. Ity generic fe-potoana tsy ho fanina ny anarana DV, izay no iray manokana karazana lahatsary nomerika. Nomerika ny lahatsary azo pr...
5 Ny zavatra ho fantatra Alohan'ny Hankanesany tsy misy mpampitohy
Alohan'ny ianao manapa-kevitra ny handeha tsy misy mpampitohy na tsy, maro dia maro ireo teboka mba mihevitra. Anao mety manontany ny tenanao raha toa ka tsy misy mpampitohy dia ho anao. Tsara, androany, maro ny olona nanontany tena io fanontaniana.
Mbola miantso ny namana sy ny fianakaviana mampiasa ny taloha finday izay Mr. Feon'ny namorona ny fotoana ela lasa izay? Koa mety tsy tena ho Vato Izao ny teknolojia fa tsy ny toetry ny zava-kanto intsony. Angamba ianao anisan'ireo olona maro izay mandefa izany avy amin'ny tsotra ny finday nandritra ny fampiasana na voip teknolojia izay nampiasa ny aterineto amin'ny finday ny olona hafa. Ny olona sasany dia mety hilazana azy ho haingam-finday. Haingam-pandeha ny finday no lehibe ho an'ny an-trano sy ny fandraharahana ny fampiasana ny. Na izany aza raha toa ianao...
Fidirana Ny Rindrambaiko: Tsy Hamela Azy Ireo Ny Mahazo Anao
Fidirana ny rindrambaiko dia natao mba hanampy hiaro ny olona amin'ny solosaina breaches. Izy no iray amin'ireo tena olana iraisana izay tojo androany. Hita fa maro dia maro ny olona ankehitriny no nivadika geniuses amin'ny hosoka amin'ny alalan'ny solosaina sasany ho azy ireo manokana hahazoana. Mba hisorohana izany avy ny zava-mitranga, maro ny olona no manao ny fampiasana ny fidirana ny rindrambaiko efa. Ahoana izany works dia tsotra. Io mitana ny solosaina azo antoka rehefa ny mpampiasa dia tsy manoloana ny na ny solosaina. Izany preve...
Tena Lehibe Sy Ny Tena Kely Televisions
Ho lasa teo 5 na 6 taona maro ny haino aman-jery (ary noho izany ihany koa ny vahoaka) dia mifantoka na ny lehibe na ny fahitalavitra na ny faran'izay kely televisions izay azo natao manodidina ny paosy. Ny kely faran'ny ny dingana ianao manana portable ny mpilalao miaraka amin'ny 2-4 screens isaky ny santimetatra fa afaka ny entany goavana mitentina lahatsary ho fanaka hardware ny habe amin'ny wallet na iray carte de crédit. Amin'ny lafiny farany ny rivotra misy ny lehibe HDTVs izay kely noho ny na inona na inona 42 [object Window] ...
Nahoana Ianao No Mila Rejistra Madio?
Rejistra madio no valiny ho madio amin'ny rejistra ny unused sy miverimberina izany rakitra hanatsarana ny miasa amin'ny solosainao. Alohan'ny isika mazava ny mila rejistra madio, ndeha isika hahatakatra ny zavatra rejistra dia ary nahoana ianao no mila rejistra madio mba enhance PC performance. Toy ny ianao te-hitahiry ny tahirin-kevitra amin'ny rakitra, ny Fikandrana mitahiry-baovao rehetra momba ny solosaina ao amin'ny Rejistra, toy ny rehetra ny rindrambaiko sy ny fandrindrana ny hardware, sy ny zavatra rehetra momba ny rafitra gdm...
Mody Tsy Misy Mpampitohy Amin'ny Tambajotra Fiarovana Ny Olana
Mandeha ny mpandraharaha avy any an-trano dia ny heriny, anisan'izany ny tsy misy commute, kokoa accommodating ny asa fandaharam -, madio ny kafe sy trano-cooked meals amin'ny fotoana rehetra tianao. Fa mandeha ny mpandraharaha avy any an-trano mampiasa ny iray mody tsy misy mpampitohy an-toerana faritra tambajotra ([object Window]) amin'ny solosainao dia mety hitondra ny halatra ny tsiambaratelo ny vaovao sy ny mpijirika na otrik'aretina penetration raha tsy sahaza asa dia nalaina. Araka ny WLANs mandefa vaovao indray ary forth mihoatra ny onja-peo, misy olona manana ny zo karazana receiver ...
Misy tsara vintana fa raha ianao no mavitrika an-tserasera amin'ny ny solosaina rafitra amin'ny lafiny sasany spyware dia mahazo voapetraka. Rehetra izany maka fotsiny ny fikitihana ny diso ny vohikala na ny fifanaovan-tsonia ho an'ny sasany ny web fandaharana. Mitana betsaka isan'andro dia misy vaovao endrika spyware fa efa noforonin'ny olona iray na ny sasantsasany amin'ny orinasa izay nitady vaovao. Koa miaraka amin'ny mora ny fisian'ireo-pandeha ny tolotra izany dia nanao ny fihanaky ny spyware na dia haingana sy mora.
Toro-hevitra mba hiarovana ny PC rakitra avy any ivelany ny fanafihana
Tena ho filaminan-tsaina no miaro ny PC sy ny aterineto momba ahy. Rehefa mifandray amin'ny tranonkala, ny asanao sy ny angona misokatra ny fanafihana isan-karazany anisan'izany ny karazana mampidi-doza mampidina. Tsotra ny lalao, sary, na programa dia mety ho ilay fiara ho an'ny malevolence.
Ny aterineto dia nomena teo amin'ny roa vaovao mahaliana ny fivoaran-draharaha eo amin'ny sehatry ny fitaterana software; software as a service sy ny tambajotra araka ny vaovao functional vondrona. Software as a service dia nomena tamin'ny alalan'ny aterineto avy subscription ary dia ireto ny heriny:
Fototry Ny Fitantanana Ny Mpikambana Ao Aminy Software: Hametraka Ny Fototry Ny
Fototry ny fitantanana dia foana ny ampahany iray lehibe misy ny fandraharahana. Izany no mahatonga ny niche tsara, raha toa ianao ka maka izay ilainao sy ny arsiva azy ireo noho ny varotra paikady. Indray mandeha ianao dia manana ny soratra fototra nanohana-up, hita fa izy io dia tsy mandeha diso, saingy misy fotoana izay izany dia mety ho simba. ary mety ho very ny ankamaroan'ny ny probable mpanjifa. Ny fananana mba hanakanana azy ireo no lehibe, ny mpikambana ao aminy fototry ny rindram-misy ho toy ny zava-drehetra ao amin'ny aterineto ny fandraharahana nich...
Manasongadina Ny XM Radio
XM Radio manome mihoatra ny 150 fandaharana fa ataovy ny mozika, ny fanatanjahan-tena sy fialam-boly, ny fifamoivoizana sy ny toetrandro fantsona. Ny mozika faritra dia manana ny lehibe indrindra isan'ny canal. Indreto 68 mozika fantsona fa ianao no afaka hifaly sy izay azonao atao ny mihaino ny hira ankafiziko indrindra raha avy nandritra ny taompolo 60, tamin'ny taona 90 na ny vaovao nivoaka ny mozika. Misy mozika-by-ny-folo taona ny fampahalalam-baovao fa ataovy ny 40, 50[object Window], 60[object Window], 70[object Window], 80s sy ny taompolo 90 hira izay ny ankamaroany pop/rock fampahalalam-baovao, ny Ambony 20 fantsona, Ny Fitiavana S...
Ny Zavatra Ianao Dia Tokony Hahalala Mialoha Ianao Download Free Rejistra Madio
Alohan'ny ianao download free rejistra madio, mazava ny zavatra rejistra madio dia, karazana rejistra madio ary ny fomba matetika ho mampiasa azy. Ianao dia mba azon'ny fakam-panahy hijery ny manome ho an'ny download free rejistra madio. Manintona ny tena. Na dia izany aza, alohan'ny ianao download free rejistra madio, mazava ny zavatra rejistra madio ary ny fomba ianao dia tokony mampiasa ny iray. Amin'ny rejistra dia ny fo ny solosaina. Izany no toerana ny rafitra mitahiry avokoa ny vaovao rehetra mikasika ny solosaina ny zavatra nataonao s...
Mandeha amin'ny zanabolana ny onjam-peo iray amin'ireo lehibe indrindra ny fanatsaràna tiako ho entina tamin'ny fandefasana hatramin'ny fampidirana FM. Mandeha ny radio fambara azo amoahana ho an'ny mihoatra ny 35,000 kilometatra (22,000 [object Window]) amin'ny feno clarity sy avo lenta ny kalitaon'ny feo. Ianao dia tsy mahazo tsy afaka miova ny fitsabahana raha mihaino mihoatra ny 100 ny radio. Ny hevitra ao ambadiky ny radio mandeha amin'ny zanabolana dia hita ao 1992, rehefa Etazonia Federaly Fifandraisana Komity iray nahazo rivotra ny S tarika (ny 2.3 [object Window].
[object Window] & CD Dika mitovy Fiarovana
Maro ny fomba hiarovana ny CDs sy DVD avy adika. Ny ankamaroan'izy ireo dia miankina amin'ny fifaninanana breaking conformity miaraka amin'ny CD sy DVD fenitra. Ao amin'ity lahatsoratra ity isika dia hiresaka momba ny fampiasana ny dummy rakitra sy ny sehatra tsy ara-dalàna, na izany aza, misy hafa ny fomba fiarovana CDs. Dummy rakitra amin'ny CDS Ho ny tena anjara CD-ROMs mampiasa ny iray ISO9660-drakitra ho amin'ny fandaminana ny misy toerana ho rakitra sy ny laha-tahiry. Ny ankamaroan'ny fotoana izany dia nampiasaina teo ambanin'ny fanampiny sophisticated fil...
Karazana famakiam-boky ny rindrambaiko rakitra izay manoritsoritra ny rindrambaiko mpanera ao anatina rafitra ampiasainao, typically Fikandrana. Koa izany manoritsoritra ny mpiara-fampianarana, ary ny loharanon-karena hafa amin'ny Mahazatra Zavatra Modely mpizara. Karazana famakiam-boky rakitra noforonin'ny Hita Fototra dia foana ny manana .TLB ny tovan'ny. Ny .TLB rakitra ilaina avy amin'ny ny mpivatsy nifandray tamin'ny mpizara. Karazana famakiam-boky dia mety ho nieritreritra ho roa ny andiany iray IDL (mpanera ny Famaritana ny Teny) rakitra. Hita fototra miteraka ny karazana tranomboky rehefa...
Indexing Sy Ny Rejistra
Fikandrana Indexing sampan'asa sy ny rejistra madio no mifandray amin'ny tena akaiky. Fikandrana indexing mamela ny rafitra mba hitady ary alefaso ny rakitra sy ny fandaharana haingana sy efficiently. Amin'ny izao tontolo izao amin'ny solosaina ny fiteny sy ny jargon, ianao dia avy manerana teny fantatra amin'ny anarana hoe ny rafitra rejistra. Ity ivo ny soratra fototra fa ny rafitra mampiasa arahana mba hampahomby alefa amin'ny rafitra ampiasainao raha tsy misy kosa dia-tafalatsaka sy hitches. Io soratra fototra, izay mitahiry ny laza toy izany ho toy ny angona izay mikasika ny...
Inona No Classid
Alohan'ny ianao no mandeha mialoha sy download rejistra madio mazava ny hoe nahoana izany no ilaina. Toy ny tranonkala pejy loads momba ny rafitra, mety ho niteraka nolazaina ny fametrahana maro ny ActiveX anisan'i mialoha ny pejy mety ho tanteraka nisintona. Ity tokoa fa ny mpizaha afaka interpret ny ActiveX anisan'i sy haneho azy ireo araka ny tokony ho izy ny rafi -. Izany ihany no hany-tsakafo raha ny fanaraha-maso ampiasaina amin'ny tranonkala pejy dia tsy efa tao amin'ny rafitra. Raha toa ianao ka mihena alàlana ny fametrahana, ny pejy wi...
Inona No MDI – Haino Aman-Jery Fiterahana Index?
[object Window] - Haino aman-jery Fiterahana Index Haino aman-jery Fiterahana fizahan-takila dia misokatra tsotra no ampiasaina amin'ny kalitao assurance ny IP lahatsary ny rafi -. MDI dia natao ho famahana ny olana ny fanaraha-maso ny IP-encapsulated lahatsary zavatra hafahafa ao mivantana ny rafitra. Ny RFC ([object Window] 4445) ho MDI antsipiriany ny technicalities ity any amin'ny halalin'ny, kanefa ny olana amin'ny fomba ity dia mihatra ho tena izy ny rafi-dia ilaina bebe kokoa ho an'ny olona maro, ary izany no tanjon'ny ity lahatsoratra ity. Ny olana: Ny olana fototra rehefa hamaky IP...
Iray Nintendo Wii Bundle Dia Iray Ajanony Ny Toeram-Pivarotana
Amin'izao fotoana izao ianao no itokiana nandre ny revolisionera vaovao lalao video sehatra, ny Nintendo Wii. Tsy tahaka ny zavatra izay efa tonga mialoha izany, ny Wii dia mahatonga ireo mpilalao anjara amin'ny lalao niaraka tamin'ny revolisionera vaovao ny rafitra fanaraha-maso. Ny Wii controller dia tsy misy mpampitohy lavi-toerana fanaraha-maso fa hiverina ny fahaiza-misaina ny hetsika ao anatin'ny telo ny habaka. Fa lavi-toerana sensing ny teknolojia dia mamela anao eschew ny conventional tsindry sy joysticks fa efa ny tsotra lahatsary lalao nandritra ny taompolo. Fa tsy, ny pushin...
Misy Solosaina Dia Mety Ho Sarimihetsika Fitaovana Miaraka Dvd Burner Hardware
Amin'izao fotoana izao, DVD Burner hardware mitana toerana lehibe ny lazany ao amin'ny indostrian'ny teknolojia. Ankehitriny tsotra fare amin'ny manodidina ny isan-karazana solosaina sy laptop, DVD Burner hardware dia indray mandeha heverina ho toy ny zavatra iray marvel. Ireo mpampiasa amin'izao fotoana no vaovao functions misy azy ireo izay mahatonga ny fialam-dry milina fa efa nisy nanao ireto avy izany hardware. Izany dia niafara tamin'ny ara-barotra lehibe fahombiazana ny milina. Mba ahafahana mandika ny vaovao avy amin'ny iray DVD mba ...
Ny Maha-Zava-Dehibe Rejistra Madio
Amin'ny sanda tsy miova fampiasana, ny rejistra no clogged amin'ny tsy misy ilàna azy ny rohy sy ny rakitra. Raha ny marina amin'ny rejistra dia scanned isaky ny misy masontsivana ho vaovao, ary ireo tsy misy ilàna azy data hitony ny asa. Mahomby rejistra madio afaka manampy anao hiatrika olana toy izany. Mba hahatakatra ny maha-zava-dehibe rejistra madio, ndeha isika hahatakatra ny fomba Fikandrana amin'ny asa. Windows dia misy soratra fototra fa zatra mitahiry ny rafitra vaovao, izay ilaina ahafahana mikirakira ny operating s...
Ny Zavatra Rehetra Tokony Ho Fantatra Momba Ny Rejistra Ny Mpanadio
Inona No Rejistra Ny Mpanadio Ve? Rejistra madio afaka ny ho iray amin'ireo tena manan-danja PC iraisan'ny ianao ao amin'ny arsenal ao ny tsy fisian'ny fikarakarana ny fandaharana ho anao ny varavarankely rafitra ampiasainao... Ny solosaina rejistra dia ny foibe toerana ao anatin'ny Fikandrana izay rehetra mpitsikera ny angona mikasika ny tsirairay fandaharam-voapetraka ao amin'ny solosainao dia voatahiry...data mitsikera ny malefaka asa ny PC. Fa vaovao ny solosaina ianao dia nitondra an-trano iray, raha lasa izay angamba koa tsy mandeha araka ny fifadian-kanina toy ny indray mandeha wa...
Mianatra Momba Ny Windows Vista Rejistra Madio
Vao ataovy ao an-tsaina, azonao atao ny mandahatra ny vista rafitra tonga lafatra operating-panjakana araka ny regularly fanadiovana azy miakatra sy Rejistra Madio no iray amin'ny fitaovana izay hanampy anao tsy hanao izany. Rindranasa nisy olana teo am-hafatra dia nahena noho fampitomboana ny hafainganam Vista rafitra ampiasainao toy izany koa ny zava-bita. Adware sy ny Spyware mandao iray manontolo plethora ny fahadisoana fa ny Rejistra Madio removes. Noho izany, ho feno sy azo antoka Vista traikefa, nahazo Windows Vista Rejistra Cleane...
Ny Fisafidiana Ny Zo Motherboard – Iray Mpividy Guide
Rehefa tonga ny fisafidiana ny zo Motherboard, ianao dia mety te-hanomboka nivoaka avy nivoaka hitady ny marina ny zavatra iray Motherboard dia inona izany no ho. Iray motherboard dia fototra ampahany solosainao, raha toa ianao hatramin'izay nisokatra ny tilikambo na atidoha, satria tiako ny miantso azy hoe. Ny motherboard dia ny lehibe circuit board mipetaka ny raharaha. Ny motherboard dia ny atidoha fa manampy ny mafy kapila hilaza ny solosaina ny zavatra atao. Rehetra ny tena anisan'i ny solosaina dia mipetaka amin'ny mo...
Hahafantatra ny fomba MP3 manova ny anaran'ny sy ny fikarakarana mety ho haingana sy mora.
[object Window] / CCNP an-Trano Lab Tutorial: Ny (Maro) Tariby Ireo Karazana Ary Tratra Ny Tanjona
Maimaim-poana ny Raki-Mampiantrano ny Tolotra amin'ny Aterineto
Toshiba no lehibe mpilalao amin'ny FAHITALAVITRA tsena
Chiropractor Hoy Toerana-Taona Ny Teknolojia Dia Manome Down-To-Earth Tombontsoa Ho An'ny Marary
Fiber Optics Ao Anatin'ny Tontolo Tena Izy
Hehy: Ampiasao Izany mba Misafidiana Up Vehivavy
Mividy Finday sy ny Finday Herim-Olana
Ny Fomba Vonjeo Vola Amin'ny Ny Inkjet Mpanonta Printy Cartridges
Tranga Iray Ho An'ny Tranga. Ipod Tranga Izany.
10 Ny Antony Mba Hividy Amin'ny Xbox 360
Poker Sarimihetsika: Ambony 5 Horonantsary momba ny Poker
Wheeled Solosaina Briefcase
Ny Fomba Tsara Ve Ianao Mahalala Ny Subscription Ny Fitantanana?
Ny PC Dia Adware, Inona No Tokony Ataoko?
Ny Aterineto Voasivana?
SEO Resaka Ho an'ny Newbies Ampahany 1 Ny 2
1 / 71234567Manaraka"